जर्मनमा स परीवार संगै के गर्दै छिन सुहाना थापा ? - Nepal Insider
Home/समाचार/जर्मनमा स परीवार संगै के गर्दै छिन सुहाना थापा ?
जर्मनमा स परीवार संगै के गर्दै छिन सुहाना थापा ?
यतिबेला नायिका सुहाना थापा आफ्नो परिवारसँग जर्मनमा छिन् । उनी चलचित्र ए मेरो हजुर ३ को विशेष प्रदर्शनको लागि जर्मन पुगेकी हुन् । सुरुमा सुहाना र झरनाले केही देशमा ए मेरो हजुर ३ को शो सम्पन्न गरेका थिए भने अहिले सुनिल पनि झरना र सुहानासँग जोडिएका छन् ।
सुहाना झरना र सुनिलकी एकमात्र प्यारी छोरी भएकाले उनको आमाबुबासँग निकै नजिक छिन् । सुहानाले आफ्नो आमाबुबासँग रमाइलो गरिरहेको तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिरहेकी छिन् ।
सबैले सुहानाको परिवार निकै राम्रो भएको बताएका छन् । ए मेरो हजुर ३ को प्रदर्शन सकेर नेपाल फर्केपछि झरना आफ्नो अर्को प्रोजेक्टको लागि समय दिनेछिन् । झरनाको हातमा दुई चलचित्र रहेका छन्, ए मेरो हजुर ४ र भागवत गीता ।
यसमध्ये पहिले कुन चलचित्र निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा झरना दोधारमा रहेकी छिन् । उनले आफूलाई पहिले भागवत गीत बनाउन मन भएको तर सबैले ए मेरो हजुर ४ बनाउन सल्लाह दिइरहेको हुँदा सबै कुरा सोचेर पहिले कुन चलचित्र निर्माण गर्ने भन्ने कुराको घोषणा गर्ने बताएकी छिन् ।
डेंगु सं’क्रमणका कारण २१ वर्षिया प्रतिक्षाको मु’त्यु
आइजीपीको नयाँ धन्दाले गृहमन्त्री छक्कै
घरको कुहिने फोहोरबाट अब नेपालमा आफ्नै घरमा यसरी ग्याँस उत्पादन
४ वर्षपछि खुलेको तातोपानी नाका पुनः बन्द
आज रातिदेखि २ दिनसम्म कडा बन्द घोषणा